Xasan Sheekh oo saxiixay in ciidamada Itoobiya lagu wareejiyo amaanka Muqdisho | Voice Of Somalia
Waxaa soo baxaaya warar sheegaya in Xassan Sheekh Maxamuud uu doonaayo in amaanka Muqdisho oo gacan galsho Ethiopia.
Warqad u qoray ninka loogu noqdo talada Soomaliya Keating oo Xafiiska xaruniiso tahay magaalada Muqdisho, gaar ahaan Xarunta Xalane, taa oo uu ku dalbanaayay in Amaanka iyo maamulka goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan lagu wareejiyo diblumaasiyiinta iyo Saraakiisha ethiopia ka jooga Somalia.
Qoraalka ayaa la sheegay in dalabkiisa uu sabab uga dhigay in Ethiopia ay ka bixi karto islamarkaana ay garab lixaad leh u tahay Somalia, sidaa aawgeedna uu filaayo in laga aqbalo codsigiisa.
Xassan waxa uu sidoo kale, QM ka dalbaday in howlaha aan kor kusoo xusnay lagala tashto madaxda iyo saraakiisha Ethiopia u joogta Somalia, waxa uuna Xassan shaki galiyay isku filnaanta Dowlada Somalia.
Xassan Sheekh ayaa Dowlada Ethiopia mashruucaani cusub u saxiixay 18-4-2016 xili uu ku sugnaa magaalada Addis ababa, iyadoo heshiiskaasi uu la saxiixday misna u ballanqaaday Ra’isul wasaaraha dalkaasi Hailemariam Desalegn.
WA JIRAABA CAKAARO AYUU IMAN,INSHALLAH.